“အလှုပ်ကာရိုက်တာလေးတွေကြိုက်ပေမယ့် ဒါရိုက်တာက ရိုးအေးတဲ့ ကာရိုက်တာလေးတွေပဲ ရွေးလိုက်တာမျ?? - Yangon Media Group
“အလှုပ်ကာရိုက်တာလေးတွေကြိုက်ပေမယ့် ဒါရိုက်တာက ရိုးအေးတဲ့ ကာရိုက်တာလေးတွေပဲ ရွေးလိုက်တာမျ??
ဇာတ်လမ်းတွဲမှာသရုပ် ဆောင်ရတာပိုကြိုက်ပါတယ်ဆို တဲ့ သရုပ်ဆောင်ပိုးကြာဖြူခင်နှင့် ခဏတာ…။
မေး-လတ်တလောလုပ်ဖြစ်တဲ့ အနုပညာ လှုပ်ရှားမှုတွေပြောပြ ပေးပါဦး။
ဖြေ-လတ်တလောမှာတော့ သီ ချင်း MTV လေး တွေမှာ ပါ ၀င် သရုပ် ဆောင် ဖြစ်တာ လေး တွေ ရှိပါတယ်။ နိုဝင်ဘာလကုန်လောက် မှာတော့ ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲတစ် ခုရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်။ နောက်နှစ်အ တွက် ပြက်္ခဒိန်ရိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ အခုလာတော့မယ့် Wedding ရာသီလေးအတွက် သတို့ သား၊ သတို့သမီးဝတ်စုံလေးနဲ့ရိုက် ဖြစ်တာလေးတွေလည်း ရှိပါတယ်။ မဂ္ဂဇင်းဓာတ်ပုံလေးတွေလည်း ရိုက်ဖြစ်နေပါတယ်။
မေး-ဇာတ်လမ်းတွဲအရိုက် များပြီး ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားနဲ့ ဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေအရိုက် နည်းတယ်နော်။
ဖြေ-ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေ နဲ့ ဒါရိုက်တာတော်တော်များ များကလည်း ကမ်း လှမ်းကြတာတွေ ရှိပါတယ်။ ညီမကို ရိုက်ဖို့ကမ်းလှမ်း ကြတဲ့အချိန်မှာ ညီ မကလည်း ဒီဘက် မှာရိုက်ကူးရေးတွေ ရှိနေတာကြောင့် မရိုက်လိုက်ရဘဲ နစ်နာသွားတာ တွေများ ပါတယ်။ ညီမတို့ ဇာတ်လမ်းတွဲ တစ်ခုရိုက်ပြီဆိုရင် ခုနစ်လ၊ ရှစ်လ လောက်ကြာပါ တယ်။ အတိုလေး ဆိုရင်တောင် သုံးလ၊ လေးလလောက် အချိန်ပေးရတာကြောင့် ကြားထဲမှာ ကြော်ငြာလေးတွေ၊ နောက်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေ မရိုက်ဖြစ်လိုက်ဘဲ လွတ်သွားတာ တွေရှိပါတယ်။ ညီမအနေနဲ့ ရုပ်ရှင် တွေ ဗီဒီယိုတွေနဲ့စာရင် ဇာတ်လမ်း တွဲရိုက်ကူးရတာကို ပိုရိုက်ချင်ပါ တယ်။ ဇာတ်လမ်းတွဲက ပရိသတ် တွေဆီကို စီးဝင်မှုပိုများတယ်လို့ လည်းထင်ပါတယ်။ ပရိသတ်အား ပေးမှုလည်း ပိုများတယ်လို့ထင်ပါ တယ်။ ညီမကဇာတ်လမ်းတွဲမှာ သရုပ်ဆောင်ရတာ ပိုကြိုက်ပါ တယ်။
မေး-ခပ်အေးအေးကောင်မလေး လိုသရုပ်ဆောင်တဲ့ ကာရိုက်တာ များနေတော့ ကိုယ်တိုင်ကရော ဘယ်လိုကာရိုက်တာမျိုး သရုပ် ဆောင်ချင်လဲ။
ဖြေ-အခုနောက်ဆုံးဇာတ်ကား ဖြစ်တဲ့ ““မိုးကောင်းကင်အိမ်မက်”” ဇာတ်လမ်းတွဲမှာဆိုရင် ဆိုင်းမိုင် ဆိုတဲ့ အဆိုတော်ခပ်လန်းလန်း ကောင်မလေးတစ်ယောက်အဖြစ် ကာရိုက်တာကိုချိန်းလိုက်တာ ကြောင့် ပရိသတ်တွေလည်း တော် တော်သဘောကျကြပါတယ်။ ကိုယ်တကယ်ရိုက်ချင်တာကတော့ ဖိုက်တာအက်ရှင်ကာရိုက်တွေ နောက် ယောက်ျားလျာကာရိုက် တာမျိုးလည်း ရိုက်ကြည့်ချင်ပါတယ်။ တစ်ခါတလေကျရင် ကိုယ် ကအလှုပ်ကာရိုက်တာလေးတွေ ကြိုက်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒါရိုက်တာ ကရွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာ ရိုးအေး တဲ့ကာရိုက်တာလေးတွေပဲရွေး လိုက်တာများပါတယ်။
အမေရိကန်နိုင်ငံတွင်ပြုလုပ်မည့် မြန်မာရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွင် “ဇာတိမြေ” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးအ
အာဘေးနှင့် ထရန့်တို့ ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်အရေး ပူးတွဲလုပ်ဆောင်ရန် သဘောတူ
ပေါင်မြို့တွင် ယာဉ်တိမ်းမှောက်မှုဖြစ်၊ စိန်ရတနာကျောင်းတိုက် ဆရာတော် ပျံလွန်တော်မူ၊ အမျိုး?
တရားစီရင်ရေးလမ်းကြောင်း ပြန်လည်တည့်မတ်လာစေရေး ရှေ့နေများကောင်စီအက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်မည်
သရုပ်ဆောင်ညီထွဋ်ခေါင် နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
အီးယူနှင့် အာဆီယံကြား လွတ်လပ်သော ကုန်သွယ်ရေး သဘောတူညီချက် ဖြစ်ပေါ်လာရေး ဆွေးနွေးမှုများ ပြန??
မြောက်ကိုရီးယားသို့ သွားလာလည်ပတ်ရေး အစီအစဉ်များ ပြုလုပ်ရန် တောင်ကိုရီးယား စဉ်းစား